Timedatectl နှင့် Hwclock: နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကို Linux တွင်သတ်မှတ်ရန်မှာထားသည့်အတိုင်း Linux မှ
Timedatectl နှင့် Hwclock: နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကို Linux တွင်သတ်မှတ်ရန်မှာကြားသည်
Timedatectl နှင့် Hwclock သူတို့က2အသုံးဝင်ပါသည် ပညတ်တော်တို့ကို ကိုထိန်းညှိရန် အချိန် (နေ့စွဲနှင့်အချိန်), ငါတို့ရဲ့ GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ.
a ကို install လုပ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါအကြိမ်ပေါင်းများစွာ GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်အချို့သည်အချိန်တိုင်းစတင်သောအခါဂရပ်ဖစ်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ် terminal မှတဆင့်အသုံးပြုသူ session ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည် အချိန် (နေ့စွဲနှင့်အချိန်) del operating system ကွန်ပျူတာ၏ ပြောင်းလဲမှု (မတိုက်ဆိုင်)။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်၊ သင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သောအခါပြောင်းလဲလေ့ရှိသည် နှစ်ဆ boot (dual boot) နှင့်အသုံးပြုမှု Operative Sistems ထည့်သွင်းထားသည်
ဖော်ပြထားသည့်ပထမ ဦး ဆုံးအမှု၌သာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် GNU / Linux များခဏခဏပြtempနာကိုယာယီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာပြတ်ပြတ်သားသားမဖြေရှင်းနိုင်ပါ၊ နာရီ၏ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုဂရပ်ဖစ် (သို့) terminal မှ သုံး၍ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ အမိန့် "ရက်စွဲ".
ဒုတိယဖြစ်ရပ်မှာ၊2သို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် လည်ပတ်မှုစနစ်များ ကွဲပြားခြားနားသည် GNU / Linux နှင့် Windows, ပြproblemနာများသောအားဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အချိန် manually setting အားဖြင့်ယာယီဖြေရှင်းနိုင်သည် အချိန် (နေ့စွဲနှင့်အချိန်) ၏၏ဒုတိယနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင် BIOS ကို ကွန်ပျူတာ၏။
2 Timedatectl နှင့် Hwclock command များ
El အချိန်မတိုက်ဆိုင်ပြproblemနာ ငါတို့လမျး၌လိမ် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ သူတို့လုပ်ငန်းစဉ် ရက်စွဲနှင့်အချိန်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်၎င်းတို့မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်နှင့်တူညီခြင်းမရှိပါ လည်ပတ်မှုစနစ်များ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောတူ၏ Windows ကိုဟုတ်ကဲ့အခြားသူတွေလိုမျိုးပေါ့။ MacOS.
En GNU / Linux သို့မဟုတ် MacOS, ပုံစံကိုအသုံးပြုသည် UTC (ညှိနှိုင်းထားသော Universal အချိန်) Windows တွင်မရှိစဉ်အတူတူအချိန်ကိုသတ်မှတ်ရန်။ Windows ကို ကွန်ပျူတာသည်မှန်ကန်သောနှင့်အသစ်ပြောင်းထားသောအချိန်ကိုသိမ်းဆည်းထားသည်ဟုယူဆသည် Motherboard ဟာ့ဒ်ဝဲနာရီ, သော၌တည်ရှိ၏ BIOS ကို။ ကတည်းက နာရီနှင့် / သို့မဟုတ် BIOS ကွန်ပျူတာပိတ်ထားသည့်တိုင်ကြာသောအချိန်ကိုသင်မှတ်သားထားရမည်။
ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်၊ Windows ကို အမြဲတမ်းမှန်ကန်သောအချိန်ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ကြောင်းယူဆတယ် ဒေသတွင်းအချိန် (နာရီ / BIOS) ကွန်ပျူတာကနေနေစဉ် GNU / Linux များကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးသကဲ့သို့၎င်းသည်အချိန်ကိုသိမ်းဆည်းထားသည်ဟုယူမှတ်သည် UTC အချိန်, အပြန်အလှန်အားဖြင့် 2. ကိုအသုံးပြုသောအခါသိသိသာသာအချိန်နောက်ကျဖြစ်ပေါ်စေသည်သောထို့ကြောင့်တစ် ဦး ယုတ္တိဖြေရှင်းချက်မှန်ကန်စွာချိန်ညှိရန်ဖြစ်ပါသည် ဒေသတွင်းအချိန် (နာရီ / BIOS) အသုံးပြုသူကိုပြသမည့်အချိန်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ကွန်ပျူတာမှကွန်ပျူတာလည်ပတ်ရေးစနစ်တစ်ခုစီကို ဆက်သွယ်၍ ပြုပြင်ပါ။
Timedatectl နှင့် Hwclock command များ
ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်မှာ command များရှိသည် GNU / Linux များ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆက်သွယ်ပါ (နာရီ / BIOS) သင့်ကွန်ပျူတာမှ၎င်းကိုစည်းညှိနိုင်သည် အသုံးပြုသူကိုတစ်ချိန်တည်းပြပါမင်းလုပ်သလိုပဲ Windows ကို.
ကွပ်မျက်ခံရမီ, ၏မှန်ကန်သောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ အချိန် (နေ့စွဲနှင့်အချိန်) ထဲမှာ BIOS ကိုcommand ကိုပြီးတဲ့အခါမှာ၊ ၎င်းကိုမပြောင်းလဲပဲပြန်လည်စတင်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန် ဦး စားပေးမည် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ် ပြီးတော့၌တည်၏ BIOS ကို.
ဒီ command တွေကတော့
ဤသည်ခေတ်သစ် command ကိုသူတို့အဘို့, အထူးဖြစ်ပါတယ် GNU / Linux Distros သူတို့ install လုပ်ပါပြီ Systemd como startup ဖြစ်စဉ်ကို 1 (PID 1), ဥပမာ, DEBIAN GNU / Linux။ ၎င်းသည်ဤစနစ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစီမံခန့်ခွဲသူမှပေးသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြောင်း command ကိုအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုပါ GNU / Linux များ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆက်သွယ်ပါ (နာရီ / BIOS) ကွန်ပျူတာကနေဆင်းသက်လာပြီးအောက်ပါ command ကို execute လုပ်ပါ။
ဤ command အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊set-local-rtc [BOOL]»ထိုအအခြားသူများအကြောင်းကို DEBIAN GNU / Linux, သင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် အွန်လိုင်းလက်စွဲ (Manpages) အောက်ပါပေါ်တွင်တူညီသော၏ packages များနှင့်ပညတ်တော်တို့ကို၏ link ကို။ ဒါမှမဟုတ်« local man page ကိုဖွင့်ပြီးဖတ်ပါ။man timedatectl"။
ဒီဒဏ္endာရီနှင့်နေဆဲလက်ရှိ command ကိုအားလုံးအမျိုးအစားများအတွက်အထူးဖြစ်ပါတယ် GNU / Linux Distrosကပေါ်မူတည်ပါဘူးကတည်းက စနစ်ကျမှု၊ မဟုတ်အခြားမည်သည့်စနစ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ။
ကြောင်း command ကိုအောင်မြင်ရန်, ခွင့်ပြုပါ operating system GNU / Linux များ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆက်သွယ်ပါ (နာရီ / BIOS) BIOS တွင်ထိုအရာ၏အချိန်ကို configure လုပ်ပါ၊ ကွန်ပျူတာမှ၎င်းနှင့်ထပ်တူပြုပါ၊ အောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
မှတ်ချက်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ သင်သည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်လိုလျှင် (လက်ရှိ Operating System ရှိ BIOS အချိန်ကို configure လုပ်ရန်) အကယ်၍ သင်သည် `command ကိုသုံးနိုင်သည်။hwclock -s»ဒါမှမဟုတ် command ကို «hwclock --hctosys«.
ဤ command အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊-w»ထိုအခါအခြားသူများအကြောင်းကို DEBIAN GNU / Linux, သင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် အွန်လိုင်းလက်စွဲ (Manpages) အောက်ပါပေါ်တွင်တူညီသော၏ packages များနှင့်ပညတ်တော်တို့ကို၏ link ကို။ ဒါမှမဟုတ်« local man page ကိုဖွင့်ပြီးဖတ်ပါ။man hwclock"။
သင်ယခုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သောအခါယခု မှစ၍ နေ့စွဲနှင့်အချိန်များအတွက် UTC ပုံစံအသုံးပြုသောအခါ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အချိန် (နေ့စွဲနှင့်အချိန်) del BIOS ကို အတွက် GNU / Linux များ သို့မဟုတ်အများအပြား လည်ပတ်မှုစနစ်များ, ဟာ့ဒ်ဝဲအချိန်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာနှင့်အတူပြtheနာကိုရှောင်ကြဉ်ပါလိမ့်မည်နှင့်နှစ် ဦး စလုံးစနစ်များကိုနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, အမြဲတမ်းတစ်ချိန်တည်းရှိသည်လိမ့်မယ်။
ရက်စွဲနှင့်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ် နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းသည်နှင့်အတူရှိ၏ BIOS ကို ကွန်ပြူတာမှ, « command ကိုသုံးပြီးdate»ပြီးတော့«hwclock»အောက်ပါတို့သည်
ကနေ command ကို command များကို Execute root session ရက်စွဲကိုသတ်မှတ်ရန် မတ်လ 08, 00 ရက်တွင် 07:2020.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Timedatectl y Hwclock»,2အသုံးဝင်သော «Comandos de GNU/Linux» ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်စွဲနှင့်အချိန်ကိုသတ်မှတ်လေ့ရှိတယ် «Distros GNU/Linux»အထူးသဖြင့်အချိန်နှင့်လိုက်ဖက်သောအခက်အခဲပြsolveနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည် «ordenadores con doble booteo (inicio)»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Timedatectl နှင့် Hwclock: နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကို Linux တွင်သတ်မှတ်ရန်မှာကြားသည်
octavio dos Santos ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်ကကျွန်တော့်ကိုကူညီပါတယ်။ ငါ manjaro သစ်ကြံပိုးခေါက်ကိုသုံးနေတယ်။ graphically configure လုပ်လို့မရဘူး၊ အင်တာနက်ကနေတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်မှုလည်းမပြောင်းလဲဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းပြီးသား 😀
octavio dos santos သို့ပြန်သွားပါ
Octavio! ဆောင်းပါးကသင့်ကိုကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါ့ကိစ္စမှာငါ / etc / adjtime ကို 'LOCAL' ကို UTC အစား 'linux' က bios time ကို UTC သို့ပြောင်း ခဲ့၍ windows ကမှားသွားသည်။ အတူ
မင်္ဂလာပါ Fabian မင်းရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
resolution DNS server ဖြစ်သော PowerDNS Recursor 4.3 ဗားရှင်းအသစ်ကိုစာရင်းပြုစုပါ
phishing ဒိုမိန်းများကို Unicode အက္ခရာများဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည်